Habka for Baadhista Water uumi Transmittance of Baako Medical - Shiinaha Wellform Baako Group
Habka for Baadhista Water uumi Transmittance of Medical Baako
Habka loo baaro of permeability uumiga biyaha ee bacaha caafimaad
bacaha Medical miisaanka iftiin ay, xoog sare, quwad wanaagsan iyo cadaadiska iyo faa'iidooyinka kale, waxaa si tartiib ah bedelay dhalooyin caafimaad, waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in daawada adag afka iyo dareere category baakada daawada. Uumiga biyaha waa arrin muhiim ah oo saamayn ku tayada iyo ammaanka daroogada, si looga fogaado saamaynta uumiga biyaha on daroogada, bacaha caafimaad waa in ay leeyihiin iska caabin aad u fiican si ay u qoyaan si loo hubiyo tayada iyo ammaanka badeecada. In warqad this, nidaamka baaritaanka permeability uumiga biyaha ee bacaha caafimaad waxaa si kooban u soo bandhigay isku dhafan oo PERME BMI 3/330 nidaamka heerka gudbinta imtixaanka uumiga biyaha Labthink ee.
Heerka gudbinta uumiga biyaha waa inta badan waxaa loola jeedaa bacda caafimaad on go'doomin ah ee uumiga biyaha, shaqo iska caabin ah qoyaan si toos ah saamayn ku tayada daawooyinka nolosha shelf ee alaabta, laakiin sidoo kale arrin muhiim ah falanqaynta nolosha shelf. Ka dib markii kormeerka xamili karo uumiga biyaha xasaasi ah oo dhacdo ee daroogada suyuca su'aal caaryaysatay.
Labthink 3/330 nidaamka baaritaanka permeability uumiga biyaha, electrolytic mabda'a imtixaanka shidma, qalabka adeegsanayaa saddex qolkii imtixaanka block dhafan of technology xiranayo, gacanta ku computer, imtixaanka si buuxda oo firfircoon, ku tirtirayaan baarka, click on tijaabo ah in qaadi karaa hindisaha in ay tijaabiyaan, qaado hindisaha si loo soo afjaro qoyaan, heerkulka, heerka socodka iyo ujeeddooyinka kale ee ay gacanta ku, dhamaystirka tijaabo ah hindisaha si ay u aqoonsadaan oo statements arrinta. Qalabka ayaa sidoo kale ku xidhi kartaa sagaal mashiinada satellite, imtixaanka ka mid ah 30-baarka dhamaadka, labada howlgalka oo ahaa darajadii reer qalabaynta, awood imtixaanka, xallinta kormeerka iyo xadka kormeerka ayaa gaartay heerka sare ee caalamiga ah, iyo goolal badan Sidoo kale hayo hoggaamineed a .
Geedi socodka tijaabo ah waa sida soo socota: saamiga fin pre-daweeyey ayaa la dhigayaa in qolkii imtixaanka, iyo nitrogen ee qoyaan lagama maarmaanka ah waa firfircoon on dusha ka pack khariidad. The nitrogen ka khayroon daahirnimo sare waa firfircoon gudaha pack khariidad sababta oo ah joogitaanka Wehliyaha qoyaan ah, taagoo uumiga The dhex mari film ka baxsan khariidad in ay gudaha of nitrogen ka khayroon daahirnimo sare, by nitrogen firfircoon u kaxaystay shidma, iyada oo shidma si loo cabbiro falanqaynta uumiga biyaha fiirsashada, ka dibna loo xisaabiyo permeability uumiga biyaha iyo xuduudaheedu kale in ay iska caabin ah ee saamiga baaritaanka la qiimeeyo.
Dabcan, in la hubiyo in bacaha Baakadaha caafimaad ee uumiga biyaha iyada oo diirada u saaran ka dib markii uu marayay, laakiin sidoo kale u baahan tahay qaar ka mid ah ciyaartoyda diirada kale sida iska caabin ah qoyaan, dhagixiina way, iwm si loo xakameeyo, si loo hubiyo in tayada alaabta inta lagu guda jiro nolosha shelf.